फेसबुकमा कान्छीका बातहरु - RabinsXP Blog
by Lamichhane Rabins | August 28, 2016 | Entertainment / Facebook / Facebook Status / Kanchha / Kanchhi / Nepal / Nepali / Status / Uncategorized |0Comments
फेसबुक मा कान्छीका बातहरु (Facebook Status in Nepali)
कान्छाले आज कान्छीको फेसबुकका पनाहरु पल्टाउदै इस्टाटस हरु पढ्दै छ। सरर पढ्दै जादा…
Smiling Kanchhi / फेसबुकमा कान्छीका बातहरु / ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेउन
रिस त तब उठ्छ जब 9, 10 मा पढ्ने फुच्चीहरु फेसबुकमा तिमी भन्दै बोल्न आउछन् ???
सँस्कार नै छैन बा ?
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 1925 others like this.
ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेउन?
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 2250 others like this.
गुलाफलाई जसले पनि माया गर्छ तर पातलाई माया गर्नु पो ठूलोकुरा
सुन्दर कुरालाई माया गर्नु साधारण हो तर साधारण कुरालाई माया गर्नु पो सुन्दरकुरा! ???
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 3650 others like this.
उनले भन्यो ” मलाई तिम्रो अनुहार पनि हेर्न मन लाग्दैन “
मैले पनि भनिदिए ” त्यसो भए Android बेचेर Nokia 1100 किन,
नत्र फेसबूक र Twitter मा त मेरै चर्चा छ! ??
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 1928 others like this.
किन रुन्छौ उसको लागी जसले तिम्रो आँसु कहिले देख्दैन , अब बन्द गर रुन, तिम्रो मुस्कान हेर्न चाहाने हजारौ छन् यहाँ ???
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 2236 others like this.
मलाई ठुलो घरको बुहारी हुनु छैन
धनी केटाको पत्नि हुनु छैन
म त केवल तिम्रो साथ अनि माया चाहान्छु
जिन्दगी काट्नलाई पैसा कमाउन त म पनि सछ्यम छु नि ??
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 4969 others like this.
थर्काउने मान्छे नभएर हो,
ओढ्ने फाल्दिने मान्छे नभएर हो,
पानी हाल्दिने मान्छे नभएर हो,
म त सुत्छु अबेर सम्म,
माया गर्ने मान्छे नभएर हो।
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 3560 others like this.
नयाँ फोटो खिच्ने बित्तिकै प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्ने हतार सबैलाई हुन्छ , तर वर्षौदेखि बिग्रेको आफ्नो चरित्र सुधार्न कसैलाई फुर्सद हुँदैन ?
विचित्र छ संसार?
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 1475 others like this.
बहिर बस्या मान्छेले त यस्सो आइ फोन र DSLR क्यामेरा पठाइदिनु नि। Friend Request पठाएर बस्चन हे मेरा भगवान !! ???
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 3655 others like this.
चित्त दुख्ने बित्तिकै रोईहाल्नु हुँदैन । सबै चित्त दुखाउँनेहरु आँशुका लायक हुँदैनन् !
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 4999 others like this.
म दुब्लाए तपाइंलाई खान माग्दिन । म मोटाए नि तपाइंको सोफा भांच्दिन ।
ज्यानको बाहेक अरु विषयमा वार्तालाप शुरु गरौं न, हुन्न ?
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 4548 others like this.
“तिम्रो नम्बर दिन मिल्छ ? ” – उ मीठो गरि सोध्छ मलाई !
यहाँ अाफू ज्यानै दिन तयार छु , कसले सम्झाउने त्यो मोरालाई ???
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 5001 others like this.
अफ्टेरो त आउँछन् जान्छन् । मुस्कानलाई चैँ ओठबाट फुत्कन दिन भएन ???
You, कान्छा, फलनो, ढिश्कानो and 5514 others like this.
धेरै दिनपछी आज कान्छी ले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल पिकचर चेन्ज गरिन्।
Swastima Khadka representing Nepali Kanchhi / Khadka isaNepalese actress and model.
अनी हाम्रो कान्छो पनि के काम छ र रिप्लाई गर्न मा। तल हाम्रो कान्छा ले पनि कम्मेन्ट गर्‍यो।
खै कुन शब्द बाट सुरु गरु म यो हजुर को सुन्दर तस्बिर लाई म त अल्मल मा परे। एती राम्रो फोटो मैले कहिले नै देखेको थिएन। यो फोटो हेरेको ७ सेकेन्ड मै म बेहोस हुन पुगेछु। म बेहोस भएको देखेर मेरा साथिहरुले मलाई अस्पताल लगेछन्। अस्पतालमा मेरो उपचार हुने क्रममा मेरो होस खुल्न पुग्यो। त एक्काशी आफुलाई अस्पतालमा देखेर सपना न बिपना जस्तो लागो। साथिहरुले सोधे, कसरी बेहोस भइस भनेर। मैले जवाबमा हजुर को तस्बिर हेरेकोले भने को त साथिहरु त छक्क परे र मलाई गिजाउन थाले। डाक्टरसाब नि तेही हुनुहुन्थ्यो। कुन पिक हो हामी नि हेर्न सक्छम् भनेर भन्नु भो। तेस्पछी मैले हजुर को सुन्दर लोव्लाग्दो पिक देखादिए,देखाउन के पाको थिए ५ सेकेन्ड मै ठाउँ-को-ठाउँ मै बेहोस हुनुभो। यो देखेर साथिहरु हास्न थाले र भन्नथाले जाबो फोटो हेरेर बेहोस हुने मान्छे आज देखियो भन्दै हाशिरहे। नर्शरुले डाक्टरसाब को उपचार गर्दै थिए। केहिछिन् पछी डाक्टरसाब को होस नि खुल्यो। होस खुल्ना साथ डाक्टरसाब ले मलाई भन्नु भो त्यो फोटो मलाई अब भुलेर नि नदेखाउनु भने मैले हस हुन्छ भने तर साथिहरु भने मलाई जिस्काउदै थिए – हामी नि हेरम न बेहोस हुने पिक कस्तो रहिछ भनेर मलाई देखा भनेर मरिहत्ते गर्न थाले। मलाई देखाउने मन त थिएन किनकी साथी हरु बेहोस हुन्छन भनेर मलाई थाछ। तेहिपनी हजुर को पिक के देखाउन पाको थिए हजुर को पिक को छाया देखेर नै ठाउँको ठाउँमै मुर्छा पर्नेगरी बेहोस भए। लगतै उपचार हुँदै थियो केहिछिन्पछी डाक्टरसाब रिपोर्ट लिएर आउनुभो र मलाई भन्नुभो तपाइको साथी लाई नेपाल को इलाज ले काम गर्दैन तेसैले तुरुन्त बिदेस लैजान भन्नुभयो। यो सुनेर त म झन बेहोस हुन पुगेको हजुर को पिक को त म बयान गर्नै सक्दिन। बढी बयान गरेसी फेरी बेहोस हुन्छु कि जस्तो लागिराछ। न भन्दै अझ बेहोस भए।
अब कान्छा को यो कमेन्ट्स लाई लाइक गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
अनी कान्छा को कमेन्टमा रिप्लाई दिने पालो हजुर हो।
Next story Know Types of Linux Filesystems
Previous story 8 Things You Should Know Before BuyingaNew Mobile Phone (Smartphone)